वुहानबाट प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र - Postmandu
वुहानबाट प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र
2020-02-06 2020-02-10 PostmanduLeaveaComment on वुहानबाट प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र
‘जीवन गुमाउने डर तपाइँलाई थाहा छ होला’
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको इपिसेन्टर मानिएको चीनको हुबेई प्रान्तमा रहेको वुहानबाट एक नेपाली विद्यार्थीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेकी छिन् ।
वुहानमा रहेकी प्रमिला देवकोटाले आफूहरु कोठामा थुनिएर बसेको यतिका दिन वितिसक्दा पनि आफ्नो देशको सरकारले उद्धार नगरेकोमा वुहानमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरुको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेको बताएकी छिन् ।
तपाइहरुलाई हिजो राम्रो निन्द्रा पर्यो होला। हामी यहाँ चीनको हुवेइमा भएका विद्यार्थीहरु भने रातभर तपाई लगायतका नेताहरुले बजाइरहेको मुरली हेरेर आफैलाई चिथोरीरह्यौं ।
हामीले अझै पनि घर फर्कने समयको केही खबर पाएनौं। हामी यहाँ हरेक मिनेट नेपालका समाचार हेरेर विताइरहेका छौं, हाम्रो घर फर्कने समाचारको आसमा।
त्यो समाचार त पाएनौं तर तपाईहरुले बाजा बजाइरहको तस्वीर भने पायौं। हामी तपाई रोम जल्दा मुरली बजाउने नीरो हो त भन्दैनौ। तपाईका विगतका काम हेर्दा हामीलाई लाग्दैन तपाईको मुटु त्यति कठोर छ।
तर तपाईले पक्कै मान्नुपर्छ हामी अत्यासिएका छोराछोरी जस्ताको मनमा अझै आस नदेखाएर तपाईले आफूमा सम्वेदना भने नभएको पुष्टी गर्नुभएको छ।
हामी अहिले नेपाल सरकारलाई किन बोझ भयौ भनेर छलफल गरिरहेका छौं। हाम्रा नजिकैका भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्सका जनताभन्दा हामी किन फरक भयो भनेर सोच्यौं।
अत्यास कस्तो हुन्छ, जीवन गुमाउने डर कस्तो हुन्छ, भन्ने हाम्रो प्रधानमन्त्रीले जति कसले बुझ्नुभएको होला।
यहाँ डाक्टर पढेका देशमा काम गरेका वा अन्य पेशामा लागेका र अगाडि पढ्न आएका युवायुवती छन्। उनीहरु सोच्दछन् देश बन्न त भूगोल मात्रै काफी हुन्न। देश भूगोलमा बस्ने जनताले बनाउँछ।
-हामी वुहानमा अत्यासिएका नेपाली
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा को-को विरुद्ध मुद्दा ? (भिडियो)
पिएससिएनको डान्स फेस्टिवलमा जे देखियो (फोटोफिचर)
सात दिनको शिशु झोलामा हालेर हिँडेपछि..
विवाहमण्डपबाटै किन समातिए बेहुला-बेहुली ?
2018-05-03 2018-05-03 Postmandu
ललितपुरमा ट्रक्र पल्टिएर भ्यानलाई किच्दा दुई जनाको मृत्यु, एक घाइते
2019-04-05 2019-04-06 Postmandu